Dhammaantiin hubka Ilaah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Ugu dambaysta: ku xoogaysta Rabbiga iyo xoogga itaalkiisa. Soo jiid hubka hubka Ilaah si aad ugu adkaysato weerarada khiyaanooyinka leh ee Ibliiska (Efesos 6,10: 11).
«Laakiin maxaa yeelay carruurtan oo dhan waxay leeyihiin hilib iyo xayawaan dhiig, isagu sidoo kale wuxuu noqday hilib iyo nin dhiig. Markaa wuu awoodsiin kari waayaa kii adeegsada xooggiisa xagga dhimashada, oo ah Ibliiska » (Cibraaniyada 2,14 Tarjumaadda New Geneva).
Ciise wuxuu inoo noqday sidii nin oo kale, dembiga mooyaane. Waxaan u dabaaldegnaa Dhalashada Ciise Masiix sannad kasta. Noloshiisa wuxuu la diriray halgankii ugu adkaa abid. Ciise wuxuu diyaar u ahaa inuu kugu dhinto aniga iyo aniga halgankaan. Badbaadiyuhu wuxuu umuuqday inuu guuleystay! "Waa maxay guul," Ibliisku wuxuu ku fikiray markuu arkay Ciise inuu iskutallaabta ku dhintay. Waa maxay guuldarro guud isaga markii uu ogaaday sarakiciddii Ciise Masiix ka dib in Ciise qaatay xooggiisii ​​oo dhan.
Qaybta koowaad ee hubka Ilaah wuxuu ka kooban yahay Runta, caddaaladda, nabadda iyo iimaanka , Adiga iyo anigu waxaan gashadeen difaacan Ciise waxaana u istaagi karnaa weerarada khiyaanada ee sheydaanka. Ciise waxaan isaga difaacnaa oo aan difaacnaa nolosha Ciise ina siiyay. Waxaan haddaba si gaar ah u eegnaa tan.
«Markaa waa hubaal, inay runnimo ku dhexdaan dhexdaada» (Efesos 6,14).
Suunkayagu wuxuu ka kooban yahay run. Waa ayo runtiina? Ciise wuxuu yidhi « Aniga ayaa run ah! » (Yooxanaa 14,6) Bawlos wuxuu ka yidhi naftiisa:
"Sidaas darteed anigu ma sii noolaado, laakiin Masiix ayaa igu dhex nool!" (Galatiya 2,20 rajo oo dhan).
«Lagu sameeyay taangiga cadaaladda» (Efesos 6,14).
“Waa hamigeyga qoto dheer ee isaga la jiray (Ciise) inuu ku xirnaado. Taasi waa sababta aan markaa dambe u rabin inaan wax ka ogaado caddaaladda ku saleysan sharciga oo aan ku helo dadaalkayga. Hase yeeshe, waxaan ka walaacsanahay xaqnimada in lagu siiyey rumaysadka Masiixa, xaqnimo laga helo xagga Ilaah oo iimaanka laga helo. (Filiboy 3,9 (GNÜ).
"Lugaha La Dhigay, Diyaar u ah Istaag Injiilka Nabadda" (Efesos 6,14).
Aragtida Ilaah ee adduunka oo dhan waa nabaddiisa! Qiyaastii laba kun oo sano ka hor, dhalashadii Ciise, farriintan waxaa ku dhawaaqay malaa'igo fara badan: "Ammaan iyo ammaan waxaa leh Ilaaha ugu sarreeya, iyo nabadu ha u ahaato dadka raallinimada u leh". Ciise, Amiirka Nabadda, nabadduu keenayaa meel alla meeshuu tagoba.
«Waan kula hadlay si aad nabadi iigu jirto. Aduunka waad ka baqaysaa; laakiin kalsooni ku qabo, waan ka adkaaday dunida » (Yooxanaa 16,33).
Waxkasta oo ka sii badanna, qaado gaashaanka iimaanka (Efesos 6,16).
«Inuu xoog idin siinayo taajirnimadiisa weynaantiisa ka dib, si aad isaga ugu xoogaysatid ruuxiisa xagga gudaha ah, in Masiixu qalbigaaga ku noolaado rumaysad iyo inaad jacayl ku aasaasayso oo aad ku aasaasayso jacayl» (Efesos 3,16: 17).
Ma dooneynno inaan bidix ama midig u eegno, kaliya waxaan dooneynaa inaan eegno Ciise. Isagu wuxuu ina siiyay iimaan wuuna sii hayn doonaa ilaa aan gaarno yoolkeena. Sababta oo ah farxad weyn ayaa la sugayay isaga, Ciise wuxuu u adkaystay dhimashada iskutallaabta dusheeda » (Cibraaniyada 12,2 Rajada Dadka oo dhan).
Bawlos wuxuu yidhi: "Oo gashan hubka Ilaah oo dhan".
Marka, qaado dhammaan hubka Eebbe idiin diyaariyey! Markaa markay maalintani imaanayso xoogagga xunxun, waxaad hubaysan tihiin oo waad istaagi kartaan. Waxaad u guuleysan doontaa si guul leh waxaadna ku dhamaan doontaa guuleystaha » (Efesos 6,13 Tarjumaadda New Geneva).
Qaado koofiyadda badbaadada » (Efesos 6,17).
Laakiin innagoo ah carruurta maalintii, waxaannu jecel nahay inaan digtoon nahay, oo ah hubka hubka rumaysadka iyo jacaylka iyo koofiyadda rajada badbaadada. 1 Tesaloniika 5,8: 10 Maxaa yeelay, Ilaah go'aansaday inaannu cadhoonno, laakiin inaannu helno badbaado xagga Rabbigeenna Ciise Masiix, kan inoo dhintay, in haddii aannu toosno ama aannu wada seexanno, isla wakhtigaas aynu isaga kula noolaanno »XNUMX Tesaloniika .
"Seefta Ruuxa, oo ah erayga Ilaah" (Efesos 6,17).
Waxaa cad in ay tahay seef in Ruuxa Quduuska ahi siinayo qofka rumaysta. Seefta Ruuxaani waxaa loo arkaa inuu yahay Ereyga Eebbe. Ereyga "eray" kama tarjumin "astaamaha", laakiin waxaa laga soo qaatay "rhema". Ereygan macnihiisu waa "ka yimid xagga Ilaah", "waxa Ilaah leeyahay" ama "muujinta Ilaah". Waxaan u dhigay sidan: "Ereyga loo waxyooday oo uu ku hadlay Ruuxa Quduuska ah". Ruuxa Ilaah wuxuu noo muujiyaa eray ama wuu sii nooleeyaa. Waxaa loogu dhawaaqaa oo leh saameyn. Waxaan ka akhrinay tarjumaadda iswaafajinta ee Baybalka
«Seefta ruuxa, Taasi waa hadal Eebbe adoo ku tukanaya ruux walba tukasho kasta iyo duco kasta » (Galatiya 6,17: 18).
Markaasaa duufiyihii u yimid oo ku yidhi, Haddaad tahay Wiilka Ilaah, dheh, Dhagaxyadanu waxay noqdeen kibis. Laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi, Waa qoran tahay (Sharciga Kunoqoshadiisa 5): «Dadku kuma noolaado kibis oo keliya, laakiin wuxuu ku nool yahay eray kasta oo ka soo baxa afka Ilaah) (Matayos 4,3: 4).
Halkan waxaan ku aragnaa sida Ciise u aqbalay eraygan Ruuxa Ilaah oo jawaab u ah Shayddaanka. Maahan mid ku saabsan qofka sida ugu fiican u soo qaadan kara Kitaabka Quduuska ah. Maya! Waa dhan amaba waxba. Shaydaanka ayaa su’aal galiyay awooda Ciise. Ciise kuma qasbana inuu xaq ka dhigto wiilkiisa Ibliiska hortiisa. Ciise wuxuu ka marag furay Ilaah ka dib baabtiiskiisa: "Kanu waa wiilkayga aan jeclahay, oo aan ku faraxsanahay".
«Had iyo jeer ku baryo duco iyo duco xagga Ruuxa oo ku ilaalina adkaysasho oo dhan tukashada quduusiinta oo dhan» (Efesos 6,18 Tarjumaadda New Geneva).
Erey ahaan "duco" iyo "duco" waxaan door bidaa "inaan Ilaah la hadlo". Waxaan had iyo goor Ilaah la hadlaa hadal iyo fikrado. Ku tukashada Ruuxa waxay ka dhigan tahay: «Waxaan eegaa Ilaah oo waan kahelaa wixii aan ka idhaahdo HIM oo waxaan qalbigiisa kagala hadlo xaalad. Waxay la hadlaysaa ilaahay oo uu waxyooday Ruuxa Ilaah. Waxaan ka qaybqaataa shaqada Ilaah, halkaas oo uu horeyba uga shaqeynayay. Bawlos wuxuu ku booriyay akhristayaashiisa inay la hadlaan Ilaah ma aha oo keliya quduusiinta oo dhan, laakiin gaar ahaan isaga.
Oo ii ducee (Paul) haddii aan afkayga furo, waxaa la i siin doonaa erayga inaan si furan ugu muujiyo qarsoodiga injiilka, oo ah malaa'igtii aan ku xidhnaa silsiladdayda, inaan si furan ugu hadlo sida ay tahay inaan sameeyo. (Efesos 6,19: 20).
"Aabo, sii xoogaga ay ruuxaadu ku siin karto hodanka ammaantaada oo gudaha ku xooji. Iimaankooda, Ciise wuxuu ku nool yahay qalbiyadooda! Ha ku xidhnaayeen jacayl jacayl oo noloshooda ku dul dhisaan, iyaga iyo walaalahooda oo dhan, inay awoodaan inay fahmaan sida aan la qiyaasi karin oo ballaadhan, sida jacaylka Masiixu u weyn yahay, oo aan mala awaal ahayn. Aabe, sharaftaada oo dhan ka buuxi! Ilaahow, yaa noo sameyn kara wax aan ka badnayn oo aan wax ku weyddiisan karno ama aanraysan karno - aad buuna u weyn yahay xoogga inaga dhex shaqeeya - in Ilaah yahay kan ammaanta kiniisadda iyo Ciise Masiixba leh tan iyo qarniyada oo dhan daa'in weligeed ah. Aamiin. (Efesos 3,17: 21
«Isaga (Rabbiguna wuu arkay) mana jiro, wuxuuna la yaabay inuusan ninna Ilaah baryi karin. Taasi waa sababta ay gacantiisu isaga u taageertay oo caddaaladdiisuna ay taageertay. Wuxuu dhexda ku xidhay caddaalad sidii taangiga oo kale, oo wuxuu xidhnaa koofiyadda badbaadada. Wuxuu isku xidhay aargudasho wuxuuna huwaday jaakad qiiro leh. Laakiinse reer Siyoon iyo reer Yacquub oo dembiyadooda ka soo noqda, wuxuu u soo helayaa badbaadiye. Markaa ayaa Rabbigu eraygiisa siiyaa » (Ishacyaah 59,16: 17-20 iyo Rajada Dadka oo dhan).
Wuxuu noqday hantidiisa qoyskiisuna ma aqbalin. Imisa ayuu helay, si kastaba ha noqotee, wuxuu siiyey awood uu carruurtiisu ku noqon karaan: kuwii isaga rumeeyey magiciisa » (Yooxanaa 1,11-12).